Chidyo – 2hove
musha / chechi / The sakaramende / Chidyo
Nei vaKaturike tenda yeChidyo ndiye Muviri neRopa raJesu?
Mhinduro pfupi iri kuti vaKaturike tenda yeChidyo ndiye Muviri neRopa Jesu nokuti akanga akadzidziswa naJesu, pachake, uye muBhaibheri.
Pausiku hwaakatengeswa, Akaunganidza nevaapostora vake kuti vachengete Paseka, yetsika kudya kudya nevaIsraeri (pamusoro avaida yorusununguko kwavo muuranda muIjipiti).
Paseka zvaisanganisira nyama gwayana rechibairo (ona Exodus, 12:8). The Last Supper, yakaitika pamusoro avaida yomunhu kusunungurwa pachivi, ndiko kuzadziswa Pasika.
Usiku ihwohwo, zvino aizivikanwa Holy China, Jesu, Gwayana raMwari, akapa nyama yake uye Ropa kudyiwa akatendeka–zvivepo sezvinhu zvinoyera, muchimiro Chingwa Newaini.1
Zvapupu zvaJehovha uye mamwe mapoka vanowanzorwara kuramba dzidziso yeRoma pamusoro Chidyo pamusoro nhandare inotyora yekare wairambidza kudya ropa. In Evhangeri yaMako 7:18-19, zvisinei, Jesu akabvisa mutoro waMosesi Mishonga yairambidza-kusanganisira kudya ropa-kubva kuvateveri vake. Panguva Council Jerusarema vaApostora haana kurambidza kudya ropa, kunyange chete zvikurukuru mumamiriro ezvinhu kudzivisa buda kugumbura vaJudha (ona MABASA AVAPOSTORI 15:29 uye 21:25).
kutora chingwa, kukomborerwa, uchaiputsa, uye kuparadzira pakati vapositori, Jesu akati, "Tora, udye; uyu ndiwo muviri wangu " (Matthew 26:26). Ipapo akatora mukombe, iyo nokuropafadzwa, ndokupa kwavari, vachiti, "Inwai izvozvo, mose; Nekuti iri iropa rangu resungano, rinotevurirwa vazhinji varegererwe zvivi " (Matthew 26:27-28). Kunyange zvazvo Jesu akataura kakawanda sedimikira muushumiri hwake, panguva iyi yakaoma Akataura pachena. "Uyu ndiwo muviri wangu," Akati, pasina tsananguro. "Iri ndiro ropa rangu." Zvakaoma kufungidzira sei Jehovha angadaro zvakananga.
sangano waJesu Chidyo paKudya Kwemanheru Kwokupedzisira anozadzika Vake yakakurumbira Chingwa mharidzo Life, izvo zvakanyorwa muchitsauko muEvhangeri yaJohani wechitanhatu. mharidzo iyi aitanga kubudikidza chokuwanziridza zvingwa uye hove, naro ezviuru chishamiso chokupa kubva dukuduku uwandu zvokudya (ona Johane 6:4 kunyange kuti chishamiso iri muEvhangeri zvose ina). chiitiko ichi chinhu Chidyo dimikira, yokuvamba sezvarinoita panguva yePaseka uye wakati kwakaitwa chete payakavakirwa Jesu akazotaura kushandisa paKudya Kwemanheru Kwokupedzisira-achitora zvingwa, muchivonga, uye pakuaparadzira (John 6:11). Kana vanhu vadzoke zuva raitevera kuti vanoda chiratidzo kubva kwaAri, nokuyeuka kuti madzitateguru avo akanga apiwa mana murenje (sapamazuva Exodus 16:14), Jesu gwa, "Chokwadi, zvechokwadi, Ndinoti kwamuri, haasi Mozisi akakupai chingwa chakabva kudenga; anokupai Baba vangu vanokupai chingwa chezvokwadi chinobva kudenga. Nokuti chingwa chaMwari ndiye unoburuka achibva kudenga, uye anopa upenyu kunyika " (John 6:32-33).
"Ishe, tipei chingwa ichi nguva dzose,"Vakadanidzira (John 6:34).
"Ndini chingwa choupenyu,"He anopindura; "Iye anouya kwandiri haangatongovi nenzara, uye ani naani anotenda kwandiri haangatongovi nenyota " (6:35). Kunyange mashoko ake kuti vaJudha tsamwa, Jesu anoenderera vachimuvenga zvokutoda kumuponda, Kutaura kwake ichikura zvishoma nezvishoma zvakajeka:
47 "Chokwadi, zvechokwadi, Ndinoti kwamuri, uyo anotenda ndiye ano upenyu.
48 Ndini chingwa choupenyu.
49 Madzibaba enyu akadya mana * murenje, vakafa.
50 Ichi ndicho chingwa chinoburuka kubva kudenga, kuti munhu adye pachiri agorega kufa.
51 Ndini chingwa chipenyu chakaburuka kubva kudenga; kana munhu akadya chingwa ichi, achararama nokusingaperi; uye chingwa chandichapa nokuda kwoupenyu hwenyika inyama yangu " (6:47-51; kusimbisa yakawedzerwa).
ndima 51 rine zvazvisingarambiki uchapupu hwokuti Jesu haana kutaura nenzira yokufananidzira, nokuti rinoratidza Chingwa zvinofanira kudyiwa sezvo chete Nyama aizopindwa uye kufa paMuchinjikwa. Kutaura kuti achitaura Nenyama Yake mundima iyi Ari mutauro wokufananidzira ndiko kutaura Nyama vakatambura uye vakafa paMuchinjikwa kuti yaingova chiratidzo, nokuti mumwe chete!2
"Munhu uyu angatipa sei nyama yake kuti tidye?"Vanhu vanobvunza (6:52).
Pasinei chinovhundusa kwavo, Jesu anoenderera ose achinyatsosimbisa:
"Chokwadi, zvechokwadi, Ndinoti kwamuri, kana musingadyi nyama yoMwanakomana woMunhu nokunwa ropa rake, hamuna upenyu mamuri; Anodya nyama yangu uye anonwa ropa rangu ane upenyu husingaperi, uye ini achamumutsa nezuva rokupedzisira. Nokuti nyama yangu ndiko kudya zvirokwazvo, uye ropa rangu chimwiwa zvirokwazvo. Unodya nyama yangu uye anonwa ropa rangu anogara mandiri, uye ini maari. Sezvo Baba vapenyu vakandituma, uye ndichararama nokuda kwaBaba, saka iye anodya pandiri achararama nokuda kwangu. Ichi ndicho chingwa chakaburuka kubva kudenga, kwete dzakadai madzibaba akadya akafa; unodya chingwa ichi uchararama nokusingaperi " (6:53-58; kusimbisa yakawedzerwa).
Kupemberera yeChidyo rakanga nechepakati muupenyu hwevaKristu vokutanga, "dzaizvipira vaapostora 'pakudzidzisa uye ruwadzano, kuti nepakumedura chingwa nepaminyengetero " (Ona MABASA AVAPOSTORI 2:42). Ona kuti "The nepakumedura chingwa nepaminyengetero" rinoreva dzidziso.
makore mashomanana chete pashure pokufa wokupedzisira Apostle, Saint Ignatius muAndiyoki (D. sezvo. 107) akarondedzera dzidziso saizvozvo, pokufumura vanyengeri nokuti muchirega "kubva Chidyo kubva pakunyengetera" (Tsamba kuna Smyrnaeans 6:2). Kuti Church yokutanga, uyezve, akatora Sunday, zuva Yorumuko, sezvo Sabata rake inotaurwa MABASA AVAPOSTORI 20:7, iyo inoti, "Nomusi wokutanga wevhiki, ... isu vaungana kumedura chingwa ... " (cf.. Didache 14; Justin Martyr ari, First Apology 67).
Saint Paul anozivisa zvose mana uye dombo kuti spew mvura vaIsraeri sezvo Chidyo madimikira. "Vose vakadya zvokudya zvimwe zvoMweya uye vose vakanwa zvokunwa zvimwe zvomweya zvinobata,"Anonyora. "Nokuti vakanwa kubva padombo romweya rakafamba navo, uye dombo iri raiva Kristu " (Ona tsamba yake yokutanga kuna Corinthians10:3-4 uyewo Bhuku Zvakazarurwa 2:17). Anoenderera mberi arayire vaKorinde nokushaiwa kwavo kutya pakugamuchira yeChidyo, kunyora:
11:23 Nokuti ndakagamuchira kubva kuna She kuti ini ichowo kwamuri, kuti Ishe Jesu neusiku hwaakatengeswa wakatora chingwa
24 uye wakati avonga, akachimedura, akati, Uyu ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi. Itai izvi muchindirangarira.
25 In Saizvozvowo mukombe, mushure mechirariro, vachiti, Mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu. Ita izvi, nguva dzose kana muchiunwa, muchindirangarira.
26 Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nokunwa mukombe, munoparidza rufu rwaIshe kusvikira asvika.
27 Uyo, saka, anodya chingwa kana kunwira mukapu yaShe zvisakafanira achava nemhosva tichisvibisa muviri neropa raShe.
28 Regai munhu kuzviongorora, uye saka kudya chingwa uye kunwa mukombe.
29 Nokuti ani naani anodya nokunwa pasina zvaasingatsauri muviri unozvidyira nekuzvimwira kutongwa pamusoro pachake.
30 Ndokusaka vazhinji pakati penyu vasina simba uye vachirwara, uye vamwe vakafa (ona Matthew 5:23-24, wo).
Per ndima 27, kugamuchira Chidyo kukodzera kuti kutadzira Muviri neRopa zvaIshe. saka, zvinokosha achibvunza: sei aigona kukodzera negashiro zvavo chingwa newaini mari kuti chivi pamusoro Muviri neRopa raJesu? Paul anoti kunyange kuti akaipa negashiro Chidyo ndiye chikonzero "sei vazhinji pakati penyu vasina simba uye vachirwara, uye vamwe vakafa " (V. 30).
Zvakakodzera chete kuti yakakurumbira mangwanani Patristic (Baba Church) Mashoko ari Real Kuvapo dzinobva Saint Ignatius muAndiyoki, akadzidza Faith kuruoko tsoka Evangelist John. Munenge mugore A.D. 107, kushandisa dzidziso yeChechi Chidyo kudzivirira zimukadzimu pamusoro Docetists, uyo akaramba Jesu akanga auya zvechokwadi munyama, Ignatius akanyora:
Cherechedza vaya heterodox pfungwa pamusoro nyasha dzaJesu Kristu kwasvika kwatiri, uye ona kuti zvinopesana mafungiro avo kuti pfungwa dzaMwari. ... Ivo kurega kubva Chidyo kubva mumunyengetero, nekuti havazivi kureurura kuti yeChidyo ndiye Nyama kwemuponesi wedu Jesu Kristu, Nyama yakanga akatambudzikira zvivi zvedu uye Baba, mukunaka kwake, vanomutswa zvakare (Tsamba kuna Smyrnaeans 6:2; 7:1).
The chete Rinodzora kuti vakatambura uye vakafa paMuchinjikwa kuti zvedu uye akadzoka kubva kuvakafa, sezvo Ignatius akatsanangura, aripo kwatiri muna Mutsvene Eucharist (ona Johane 6:51).
Saint Justin ari Martyr, kunyora kumativi 150, akati Chidyo Chingwa Newaini tinogamuchirwa "kwete chingwa sehwakajairika kana nevakawanda zvinobata,"Nokuti Ndivo" nyama neropa kuti zimukadzimu kwaJesu " (First Apology 66).
munenge 185, Saint Irenaeus wekuLyons, vane mudzidzisi Saint Polycarp yeSimina (D. sezvo. 156) vaizivawo John, akataura Chidyo mukudzivirira pamuviri rumuko pamusoro Gnosticism. "Kana muviri zvirege kuponeswa,"Nharo pamusoro Saint, "zvino, saizvozvo, hakuna Ishe tidzikinurei neRopa Rake; uye kana riri kapu Chidyo tibatsirwe, tigogoverwa Ropa Rake kana Chingwa chatinomedura tibatsirwe, tigogoverwa Mutumbi waKe (1 VaK. 10:16)" (Against vezvakatsaukara 5:2:2).
Origen akataura yeChidyo nechepakati remakore rechitatu, "Kare, nenzira isina kujeka nenzira, pakanga mana zvokudya; ikozvino, zvisinei, zvizere maonero, pane Food True, Nyama yeShoko raMwari, sezvo iye pachake anoti: 'Nyama yangu ndicho chokudya chechokwadi, uye ropa rangu ndicho chokunwa chechokwadi ' (John 6:56)" (Homilies pamusoro Numbers 7:2).
Saizvozvowo, Saint weSaipuresi pamusoro muCarthage (D. 258) akanyora:
Tinokumbira kuti chingwa ichi tipiwe daily (cf.. Matt. 6:11), kuti isu tiri vaKristu uye zuva kugamuchira Chidyo sezvo zvokudya ruponeso, murege, nokuda vasawira vamwe chivi zvakawanda zvinorwadza uye muchirega kukurukurirana, anova kubva chingwa kudenga, uye kuparadzaniswa Body kwaKristu. ... Iye pachake anotinyevera, vachiti, "Kana mukasadya nyama yoMwanakomana woMunhu nokunwa ropa rake, hamufaniri kuva upenyu mamuri " (John 6:54) (Munyengetero waShe 18).
Ropa regwayana rePaseka risingatsvi. Saizvozvo, zvakanga rambidzwa Israeri kuti uparadze ropa mhuka, sezvo ropa raimiririra simba nemhuka upenyu, raiva Mwari oga (ona Genesis, 9:4, uye Leviticus, 7:26). Asiwo, ari Chidyo, Mwari anoda kugovana Ropa Rake, Life yake chaizvo, nesu kuti vachengetwe zvivepo sezvinhu zvinoyera. In ichi risingatauriki Gift tinova nyama imwe uye ropa, mweya mumwe, naMwari (ona Evhangeri yaJohani 6:56-57 uye Bhuku Zvakazarurwa, 3:20). ↩
Jesu anoita kushandisa mutauro wokufananidzira panotaurwa paChake kumwewo muna Johani Gospel, Anokudana Pachake "musuo" uye "muzambiringa," semuyenzaniso (10:7 uye 15:5, zvichienderana zvakadaro). Mune zvimwe zviitiko izvi, zvisinei, Haaiti kushandisa zvinenge zvakafanana kusimbisa mashoko ake kuti zvaanoita mune John 6, umo iye akadzokorora pachake zvakare uye zvakare pamwe vachiwedzera zvakajeka. Uyewo izvi zvimwe mashoko muve gakava pakati vateereri nzira mashoko ake John 6 ita. Uyezve, ari Evangelist John chaizvoizvo anotizivisa Jesu ndichitaura nomufananidzo mu John 10:6, chinhu haana kuita chitsauko rechitanhatu. ↩